Taiwan oo Somaliland ka Caawinaysa Dhinaca Ammanka. | Hargeysa World~Herald
Taiwan oo Somaliland ka Caawinaysa Dhinaca Ammanka.
UncategorizedTaiwan oo Somaliland ka Caawinaysa Dhinaca Ammanka.
Dawladda Taiwan ayaa shaaca ka qaaday in ay Somaliland ka taageeri doonto ilaalada Amaanka badda.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Dalka Taiwan ayaa sheegay in Somaliland oo ay leeyihiin xidhiidh ka caawin doonaan Ilaaladda amaankeeda dhinaca Badda.
Dawladda Taiwan waxay xidhiidh toosa la samaysay Somaliland, waxaanay ka furatay qunsuliyad, halka Somaliland-na ka furatay qunsuliyad. waxaa dhex maray somaliland iyo taiwan xidhiidh toosa oo iskaashi sida dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo waxbarashada.